Izici zokukhishwa kwamazinyo kushukela > Ukwelashwa nokuvimbela
Ukukhishwa Kwamazinyo Kwesifo Sikashukela: Ama-Prosthetics nokwelashwa
Ukwephula ushukela wegazi kuvame ukudala izifo zomlomo. Kuyaziwa ukuthi kwisifo sikashukela i-mellitus igazi liqubuka kabi, ngakho-ke lokhu kuziphatha kungukuphikisana nezinqubo eziningi. Yini okufanele uyenze uma onesifo sikashukela kudingeka asuse amazinyo?
Kungani kunezinkinga zamazinyo
Zonke izifo zomgogodla womlomo zihambisana noshukela wegazi ophezulu. Ngenxa yalesi sizathu, iziguli zivame ukukhononda ngomlomo owomile kanye ne-hypersensitivity yamazinyo nezinsini. Futhi, inkomba ye-glucose ephezulu ivusa ukuvuvukala kanye nokutheleleka, ngoba endaweni enjalo kulula kakhulu ukuthi ama-microorganisms e-pathogenic aphindaphinde.
Izici zokukhishwa kwamazinyo
Kunenganekwane ukuthi akhiphe izinyo engafuneki kakhulu nge-hyperglycemia. Eqinisweni, lo mbono unephutha. Uma kunobufakazi obuqondile, iyunithi liyakhishwa masinyane. Ukuze inqubo yokukhipha izinyo ihambe ngaphandle kwezinkinga nobunye ubunzima, kunemithetho ethile yabanesifo sikashukela:
Inqubo yenziwa kuphela ekuseni.
Ukwelashwa okuphelele kwamazinyo nomlomo onamanzi akhethekile we-antiseptic kwenziwa.
Amahora ambalwa ngaphambi kokususwa kwephiko, kuphakanyiswa umthamo we-insulin.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi lo mcimbi ubhekelwa kuphela ezimweni ezeqile, lapho iyunithi lingalondolozwa nganoma yiziphi izinhlobo zokwelashwa.
Izincomo ezijwayelekile zabanesifo sikashukela
Abantu abanalesi sifo kufanele baqaphele kakhulu impilo yabo. Ukuze ungadingi ukuthatha izingozi futhi wenze imishini yokuhlinzwa emgodini womlomo, zama ukulandela le mithetho:
Iya kudokotela wamazinyo njalo ezinyangeni ezi-3.
Thenga ibhulashi elithambile bese unamathisela ngaphandle kwezinhlayiya ezinolaka, eziklanyelwe koqweqwe lwawo olubucayi.
Shintsha ibhulashi njalo emavikini ama-4.
Hlola ushukela wakho wegazi njalo.
Hlanza umlomo wakho nge-decoction yamakhambi ebusuku.
Lapho uvakashela udokotela wamazinyo, qiniseka ukuthi uxwayisa ngokuba khona kwesifo sikashukela.
Ngesikhathi sokuqina okuqinile kushukela, zama ukudla ukudla okungaguquki, lokhu kuzosiza ukugwema ukwakheka kwezilonda kulwelwesi lwama-mucous.
Thatha imithi njengoba iyalelwe udokotela wakho.
Ngezimpawu ezingathandeki neze, iya kudokotela onguchwepheshe ngokushesha!
Isifo sikashukela nezifo zamazinyo
Njengoba isifo sikashukela namazinyo kuhlobene ngokuqondile, ngenxa yezinga likashukela wegazi esikhungweni sikashukela, kungavela lezi zinkinga zamazinyo ezilandelayo:
Ukuthuthukiswa kokubola kwamazinyo kwenzeka ngenxa yokuqina komlomo owomile, ngenxa yale enamel yezinyo iphelelwa amandla.
Ukuthuthukiswa kwe-gingivitis ne-periodontitis kubonakaliswa ngesimo sesifo sezinsini. Isifo sikashukela sikhulisa izindonga zemithambo yegazi, ngenxa yalokho, izakhi zomzimba azikwazi ukungena ngokuphelele kwezicubu. Kukhona nokuncipha kokuphuma kwemikhiqizo ye-metabolic. Ngaphezu kwalokho, abanesifo sikashukela banokungancishiswa kokungazetheki kokutheleleka, yingakho amagciwane elimaza umgogodla womlomo.
I-Thrush noma i-candidiasis kushukela lesisu somlomo livela ngokusetshenziswa njalo kwama-antibiotic. Esikhathini sesifo sikashukela, ingozi yokuthola ukutheleleka ngefungal ye-cavity yomlomo ikhuphukile, okuholela ekutheni ushukela omningi wamathe. Enye yezimpawu zokuqanjwa kwe-pathogen umuzwa ovuthayo emlonyeni noma ebusweni bolimi.
Isifo sikashukela i-mellitus, njengomthetho, sihambisana nokuphulukiswa kancane kwamanxeba, ngenxa yalokho, izicubu ezonakele emgodleni womlomo nazo zibuyiselwa kabi. Ngokubhema njalo, lesi simo siyanda, maqondana nalokhu, ababhemayo ngohlobo lwe-1 noma uhlobo lwe-2 mellitus sikhulisa ubungozi be-periodontitis ne-candidiasis ngezikhathi ezingama-20.
Izimpawu zokulimala kwamazinyo zimpawu kakhulu. Izibonakalisa ngesimo sokuvuvukala, ubomvu bezinsini, ukopha esimweni somthelela omncane wemishini, ushintsho lwe-pathological ku-enamel yezinyo, ukuqaqamba.
Uma uhlangabezana nezimpawu, ukoma noma ukuvutha emlonyeni, iphunga elingathandeki, kufanele uthintane nodokotela wakho wamazinyo ngokushesha. Isimo esifanayo kubantu singase sibe uphawu lokuqala lokukhula kwesifo sikashukela, kulokhu, udokotela uzokweluleka ukuthi uhlolwe udokotela oyi-endocrinologist.
Lapho likhuphuka izinga likashukela egazini, liphakama nengozi yokubola kwamazinyo, ngoba amagciwane amaningi ezinhlobo ezahlukahlukene azokwakheka ngomlomo. Uma i-plaque ingasuswanga emazinyweni, kwakhiwa i-tartar, evusa inqubo yokuvuvukala ezinsinini. Uma ukuvuvukala kuqhubeka, izicubu ezithambile namathambo asekela amazinyo aqala ukuqhekeka.
Ngenxa yalokhu, izinyo elixakile liyaphuma.
Ukwelashwa kwamazinyo sikashukela
Isifo sikashukela i-mellitus siyimbangela yokuqhamuka kwezifo ezithile zomgogodla womlomo kanye nokuvela komoya ongemuhle. Ezigulini ezinesifo sikashukela, ngenxa yokwenyuka kweglucose yegazi nokuphazamiseka kokujikeleza kwezicubu ezithambile, kunomzwa womlomo owomile, ukuncipha kwe-saves, kanti nenani lama-microorganisms e-pathogenic asemgodini womlomo likhula ngenkuthalo. Kukhona ushintsho ekwakhekeni koqweqwe lwawo lwamazinyo - lokhu kuyimbangela yokuduka kwamazinyo.
Ngasikhathi sinye, ukuwohloka okukhulu kwemisebenzi yokuvikela umzimba kubhekwa ezigulini, ubungozi bokuthi usuleleke ezifweni buyanda. Lokhu ukutheleleka kubangela izifo zomgogodla womlomo, njenge-gingivitis, i-periodontitis, isifo se-periodontal.
Ukuxilongwa kusenesikhathi kwezifo zamazinyo nokwelashwa kwazo okufika ngesikhathi kudlala indima enkulu ekugcineni kwezinyo. Kungakho, ukuze sithuthukise ikhwalithi yempilo yeziguli ezinesifo sikashukela, kuyadingeka ukuthi kunikezwe inhlangano ecacile yobudlelwano phakathi kwe-endocrinologists nodokotela bamazinyo. Kulokhu, ukukhetha kodokotela wamazinyo kufanele kusondele kubo ngokucophelela.
Kumele kukhunjulwe ukuthi udokotela wamazinyo kufanele azi kahle imininingwane ethile yokwelashwa kanye ne-prosthetics yeziguli ezinesifo sikashukela.
Ukuqedwa kwezinkinga zomlomo kwenziwa ngesifo sikashukela esikhokhelwayo.
Uma kunesifo esibi esithathelwanayo emgodleni womlomo womuntu onesifo sikashukela esingaphekiwe, khona-ke ukwelashwa kwaso kwenziwa ngemuva kokuphuza i-insulin ephezulu kakhulu. Isiguli esinjalo kumele sinqunywe ama-antibhiksiki nama-analgesics. I-anesthesia inconywa kuphela esigabeni sesinxephezelo.
Udokotela wamazinyo kumele abe nayo yonke imininingwane ngesimo sempilo sesiguli futhi alawule kahle isifo esingalapheki, ngoba ukwelashwa kwamazinyo esiguli onesifo sikashukela ngokuhlukile akuhlukile ekungenelweni okufanayo kubantu abajwayelekile.
Isizinda Samazinyo Sesifo Sikashukela
Inqubo yokukhipha izinyo lesifo sikashukela ingadala inqubo yokuvuvukala okukudla emlonyeni wesiguli futhi ibuye isibolekise lesi sifo.
Ukuhlela ukukhishwa kwamazinyo kubalulekile kuphela ekuseni. Ngaphambi kokuhlinzwa, kuphakanyiswa umthamo omncane we-insulin, futhi ngokushesha ngaphambi kokuhlinzwa, umlomo uphathwa nge-antiseptic. I-anesthesia ivunyelwe kuphela uma kunxeshezelwa. Ngesifo esibolile, izinhlelo zokususa nokwelapha amazinyo kufanele zihlehliswe ngoba ziyingozi kakhulu.
Isimo sengqondo sokuthambekela kwesifo sakho, ukungathandi ukusilawula, singanciphisa ngokushesha umuntu amazinyo. Ngakho-ke, kungcono ukunakekela amazinyo nomgogodla womlomo ngokwakho: uhlanza njalo futhi uhlole isimo saso nodokotela wamazinyo, zinike isikhathi izindlela zokuvimbela ukwanda kwezifo zamazinyo. Le ndlela izosiza ukubambezela isikhathi lapho ungeke ukwazi ukwenza ngaphandle kodokotela.
Amathiphu wabashukela lapho evakashela udokotela wamazinyo
Isiguli esinesifo sikashukela sisengozini yezifo zomgogodla womlomo, ngakho-ke kufanele sinake noma yiluphi ushintsho olubi emlonyeni wakhe futhi sifune izeluleko zamazinyo ezifika ngesikhathi.
Lapho uvakashela udokotela wamazinyo:
Qiniseka ukuthi umtshela ukuthi unesifo sikashukela nokuthi yisiphi isigaba. Uma kwakukhona i-hypoglycemia, lokhu kufanele futhi kuxwayiswe. Nikeza imininingwane yokuxhumana ne-endocrinologist yakho. Kufanele irekhodwe ekhadini lakho. Sitshele ukuthi uphuza muphi umuthi. Lokhu kuzogwema ukungalingani kwezidakamizwa. Uma kwenzeka umonakalo lapho ugqoke izinto ezisetshenziswayo, kufanele wazise udokotela wamazinyo ngokushesha. Ngaphambi kokulapha i-periodontitis, udinga ukubonisana nodokotela wakho we-endocrinologist. Ungadinga inkambo yokubambisana yokulwa namagciwane. Ngokuwohloka okuqinile kwesifo sikashukela, ukuhlinzwa ngamazinyo kungcono ukuhlehlisa. Ngokutheleleka okuthile, kunalokho, kungcono ukungabambezeli ukwelashwa kwabo.
Inqubo yokwelapha isifo sikashukela ingaba yinde, ngakho-ke, zonke izincomo zikadokotela wamazinyo kufanele zibhekwe ngokuqinile.
Izimbangela Zezinkinga Zesifo Sikashukela Somlomo
Imbangela enkulu yezinkinga ngama-gums, amazinyo kanye nolwelwesi lwama-mucous onesifo sikashukela esikhona ukubhujiswa koqweqwe lwawo ngenxa yezinga eliphakeme le-glucose egazini. Ngesifo sikashukela, ukuhamba kwegazi kuyaphazamiseka, okuholela ekushintsheni kwe-dystrophic emgodleni womlomo, futhi ngokuqondile kwimicu yemisipha, ama-ligaments nolwelwesi lwama-mucous oluzungeze amazinyo.
Ngenxa yalokhu, kubuhlungu, i-enamel yezinyo iqala ukuphendula kumakhaza, ukushisa nokumuncu. Amazinga kashukela asuswe phezulu adala indawo enhle yokukhula kwamagciwane, lapho inqubo yokuvuvukala ikhula khona.
Ngokulimala kwezicubu ezinjalo, ngisho namazinyo angalimele awakwazi ukubanjwa yizinsini, okuholela ekukhululweni nasekususweni kwawo okuzenzakalelayo.
Ezinye izimbangela ezivamile zezifo zomgogodla womlomo namazinyo kwabashukela:
onesifo sikashukela, kuzwakala umlomo owomile njalo, ngenxa yokuthi amandla e-enamel alahlekile, ama-caries avela,
i-pathologies yokuvuvukala kwezinsini (i-gingivitis noma i-periodontitis) ikhula ngemuva kokuqina kwezindonga emithanjeni yegazi, evame ukwenzeka kwisifo sikashukela i-mellitus,
ukuphuma kwemikhiqizo okwenziwe ngemuva kokuba imetabolism ibambezelekile, ngenxa yalokho izicubu zezithambo zomlomo wesibeletho zingagcwalisiwe ngezakhi zomzimba,
ukungasebenzi komzimba okuncishisiwe akuvumeli umzimba ukuthi uvame ukumelana namagciwane, okuholela ekuthelelekeni kolwelwesi lwama-mucous lomlomo,
uma umuntu onesifo sikashukela evame ukusebenzisa i-antibacterial, khona-ke i-candidiasis yomlomo womlomo ikhula,
ngenxa yokuphulukiswa kancane kwezilonda, izicubu zomlomo zithinteka kakhulu, izinsini ziya ziba buthaka nokuvuvukala kwenzeka,
uma umuntu onesifo sikashukela ebhema, kungamenza isimo sibe sibi kaningi.
Izici zokubonakaliswa kokuphazamiseka kwe-pathological ku-cavity yomlomo namazinyo ku-mellitus yesifo sikashukela:
redness of the membrane mucous,
izinga eliphakeme lobuhlungu
ukopha ngenxa yanoma yimuphi umthelela womshini,
Uma lezi zimpawu zitholakala, kufanele uthintane nomnyango wamazinyo ngokushesha. Ngaphandle kwalokho, kuzoholela ekulahlekelweni kwamazinyo.
Imithetho yokunakekela ngomlomo
Isifo sikashukela Le mithetho elandelayo yokunakekela umgodi wamazinyo nomlomo wamazinyo kufanele ibhekwe.:
qapha amazinga kashukela egazi ukuvimbela ukuthuthukiswa kwezifo,
vakashela ihhovisi lamazinyo okungenani amahlandla amane ngonyaka,
udinga ukuxubha amazinyo akho ngemuva kokudla ngakunye,
ibhulashi lamazinyo kufanele libe nobisi oluncane kunazo zonke,
ama-bristles kubhulashi kufanele abe athambile noma aphakathi nendawo,
qiniseka ukuthi usebenzisa i-floss yamazinyo, ngoba ikuvumela ukuthi ususe zonke izinsalela zokudla ngangokunokwenzeka,
ukuvuselela ibhalansi esekwe acid futhi iguqule iphunga elingajabulisi, hlafuna ushungamu ongenashukela,
phambi kwamazinyo, kufanele asuswe futhi ahlanze nsuku zonke,
amazinyo akhethwe kahle ngokwesisekelo sezincomo zikadokotela wamazinyo, ozokhomba ngqo ukuthi yiziphi izinkinga onazo,
Ukunameka okune-fluoride ne-calcium kubhekwa njengokuhamba phambili, kepha kukhona nezimpawu ezikhethekile zesifo sikashukela,
ibhulashi lamazinyo lidinga ukushintshwa okungenani kabili ngenyanga,
kubalulekile ukwenza i-rinses yomlomo ekuseni, kusihlwa nangemva kokudla, usebenzisa ama-rinses akhethekile noma ukwenza ama-decoctions ekhaya ngamakhambi we-sage, i-wort yase-St John, i-chamomile, i-calendula.
Okungenani kabili ngonyaka, kuyadingeka ukwenza ukwelashwa kokuvimbela nge-periodontist, wenze isisu sokuzivocavoca ngezinsini, ukujova ama-biostimulants kanye ne-vitamin premixes. Lokhu kuzonciphisa i-atrophy yezicubu, kulondoloze amazinyo.
Ezinye izeluleko eziwusizo:
Vakashela udokotela wamazinyo ofanayo ngaso sonke isikhathi.
Qiniseka ukuthi utshela udokotela wamazinyo ngobukhona besifo sikashukela, ngoba kulokhu, ukwelashwa kucacisiwe. Kubaluleke kakhulu ukukhombisa imvamisa ye-hypoglycemia.
Kubalulekile ukwazisa udokotela wamazinyo ngemininingwane yokuxhumana ye-endocrinologist ekhona, ngoba ezimweni eziningi anquma ngohlobo lonyango lokwelashwa lwamazinyo nesifo sikashukela ndawonye.
Uma uthatha noma imuphi umuthi ngesikhathi sokuya kudokotela wamazinyo, qiniseka ukuthi ukhombisa lokhu ngoba imishanguzo eminingi ayihambelani. Ukwazi kusengaphambili ngalokhu, ungaxhumana nodokotela we-endocrinologist ozokutshela ukuthi yiziphi imali ezingasetshenziswa futhi ezingasebenzi.
Lapho uya kudokotela wamazinyo, qiniseka ukuthi uthatha okukhishwa kudokotela noma ikhophi yedatha esivivinyweni sokugcina.
Yidla ibhulakufesi ngaphambi kokuvakashela udokotela wamazinyo. Lokhu kuzokwenza ngokwejwayelekile amazinga kashukela.
Ngaphambi kokwelapha ukuhlukunyezwa kwamazinyo noma ukususa izinyo, cishe ezinsukwini ezi-5, lahla ukudla okuqinile, ngoba kungavusa ukwakheka kwamanxeba.
Kuwo wonke ama-degree we-glucose akhuphukayo egazini, ukwelashwa kwezifo ezahlukahlukene zomgogodla womlomo namazinyo kwenziwa kuphela esigabeni esinxephezelwe. Ezilondeni ezithathelwanayo, ukwelashwa kubuye kwenziwe esigabeni sokuncipha kwesifo esiyimbangela. Kulokhu, isidingo esibophekile ngaphambi kokuqala ukwelashwa ukwethulwa kokulungiswa kwe-insulin. Abantu abanesifo sikashukela banikezwa ama-painkiller nemithi elwa namagciwane, i-anesthesia yendawo iyenziwa.
Lapho ususa izinyo, inqubo yokuvuvukala okunamandla kungenzeka, kanye nokubola kwesifo sikashukela, ngakho-ke, izidingo ezithile kufanele zilandelwe:
ukukhipha izinyo kwenziwa kuphela ekuseni,
kutholakala umthamo we-insulin,
umgogodla womlomo uphathwa ngama-antiseptic agents,
ukukhipha izinyo kungenzeka kuphela esigabeni sesinxephezelo,
onesifo sikashukela esibolile, ukuhlinzwa kukhanseliwe, ngoba lokhu kuzoholela emiphumeleni emibi.
Udokotela wamazinyo kuphela onolwazi olukhethekile mayelana nesifo sikashukela okufanele abambe iqhaza kwezimpawu zesifo sikashukela. Kuvela ukuthi abanesifo sikashukela bwedlule kakhulu umkhawulo wokuzwela ubuhlungu. Ngaphezu kwalokho, amasosha omzimba aba buthaka, ngenxa yalokho isiguli singakwazi ukubekezelela kalula i-prosthetics isikhathi eside.
Udokotela onolwazi kufanele akhethe ama-prostheses akhethekile azowusabalalisa kahle umthwalo. Kwama-prostheses, izinsimbi ezilandelayo zivame ukusetshenziswa: i-alloy ye-nickel ne-chromium, chromium ne-cobalt, iplatinamu negolide, titanium.Kodwa-ke, ku-mellitus yesifo sikashukela, ama-prostheses wensimbi awathandeki, ngoba angadala ukungahambi kahle. Umphumela ongemuhle wesakhiwo sensimbi kuzinkomba zokuphikisana nobungako boketshezi lwe-salivary luholela kulokhu.
Muva nje, abanesifo sikashukela bathathe isinqumo sokufaka ama-prostheses kusuka kuzisekelo ezingathathi hlangothi, ngokwesibonelo, ama-ceramics. Le miqhele ihlangabezana nazo zonke izidingo zabantu abanesifo sikashukela, banezinkomba ezisezingeni eliphakeme, izosebenza isikhathi eside futhi ngeke ilimaze umzimba.
Izimila zamazinyo zenziwa kuphela esigabeni sesinxephezelo sikashukela. Ngaphambi nje kwenqubo, udokotela unquma inkambo yokusebenzelana yokwelashwa ngemithi elwa namagciwane.
Uzofunda kabanzi ngezici zezifo zomlomo kushukela, kanye nezindlela zokwelashwa ezivela kuvidiyo yethu. Lokhu kuzotshela udokotela wesigaba esiphakeme kunazo zonke, udokotela wamazinyo uNatalia Anatolyevna Sidorova:
Wonke umuntu onesifo sikashukela kufanele anake izinguquko ezincane kakhulu emlonyeni ngendlela efanele bese eya kudokotela wamazinyo ngokuphuthumayo. Uma kunokwehliswa kweshukela okuphezulu, ukwelashwa ngamazinyo kuyinkimbinkimbi. Kodwa-ke, lapho kutholwa i-etiology esithathelwanayo yesifo somlomo, ukwelashwa kusheshe.
Yiziphi izinhlungu zamazinyo okufanele uzikhethele ushukela
Uma amazinyo angasetjenziswa njengamazinyo asekelwayo agcinwa emgodleni womlomo wesiguli onesifo sikashukela sohlobo lokuqala noma lwesibili, ukubuyiselwa kobuqotho besakhiwo kungafakwa ngezindlela zendabuko, kepha ama-nuances alandelayo kufanele abhekwe:
i-prosthetics yeziguli ezinesifo sikashukela akufanele yenziwe kusetshenziswa izinto eziqukethe insimbi. Lokhu kugcwele imiphumela emibi futhi kuholela ekuwohlokeni okukhulu kakhulu komgodi womlomo wesiguli. Abantu abanesifo sikashukela bangafaka kuphela okwakhiwa kwensimbi engenama-orthodontic. IZirconia, imiqhele porcelain isungulwe kahle.
abanesifo sikashukela banomkhawulo owandayo wokuzwela kobuhlungu, ngakho-ke zonke izinqubo zamazinyo zibabangela ukungakhululeki. Udokotela kufanele akubhekele lokhu futhi asebenzise ama-anesthetics anamuhla futhi aphephile. Lapho ujikisa amazinyo, isiguli singase sifakwe i-ultracaine ngokufakwa kwenani elincane le-adrenaline,
njengoba iziguli ezinesifo sikashukela zikhathala ngokushesha, kufanele kudwetshwe uhlelo lwe-prosthetics lwamazinyo ukuze izinqubo zezokwelapha zingathathi imizuzu engaphezu kwama-30 kuye kwayi-40 ngesikhathi.
Konke ukukhohlisa ngesikhathi sokudumba kwezimpawu zesifo sikashukela kufanele kwenziwe ngokucophelela nangokucophelela ngangokunokwenzeka ukuze ulwelwesi lwama-mucous lungalimali. Uma, ohlelweni lokuvuselela indawo yokuhlala, izilonda ezi-infi ezihlukumezekile noma izilonda ezibolile, kufanele zelashwe ngokushesha ukuze isimo singabi sibi.
Ngaphandle kwalokho, i-prosthetics yesifo sikashukela i-mellitus ayihlukile kokujwayelekile. Izakhiwo zepulasitiki ezisuswayo zifakiwe, uma kungekho inani elikhulu lamazinyo, "amabhuloho" ahleliwe kanye nomqhele - uma kuphela amayunithi athile ebhujisiwe.